Siyanyuka isibalo samazwe ahlaselwe yiCoronavirus
UDOKOTELA efake izimfonyo ehlola iziguli ezilaliswe esibhedlela sesikhashana iTazihu Gymnasium eWuhan, eChina. Lezi ziguli bezihlolwa ukuthi azinalo yini igciwane iCoronavirus
PHILI MJOLI | March 3, 2020
SINYUKA ngesivinini isibalo samazwe ahlaselwe wubhubhane iCoronavirus (Covid19) kusukela ngeSonto.
Angu-60 amazwe okubikwa ukuthi anabantu abahlaselwe yileli gciwane emhlabeni.
Lokhu kunomthelela kwezokuvakasha, ezomnotho, ukufunda, ukuya emasontweni nokuphila kwabantu nsuku zonke.
E-Australia naseThailand bekungokokuqala ngeSonto ukuthi kube nabantu abashonayo ngenxa yaleli gciwane.
I-Dominican Republic neCzech Republic bekungokukuqala kuqinisekiswa ukuthi kunabantu abahaqwe yileli gciwane elithelelanayo.
E-Iran izolo abantu abashonile ngenxa yokuhaqwa yileli gciwane bese bengu-54 okuyisibalo sokuqala esikhulu sabantu abake babulawa yileli gciwane esike saba khona kwelinye izwe elingaphandle kweChina, okuyilapho lolu bhubhane luqale khona ezinyangeni ezintathu ezedlule. E-Iraq, Italy neSouth Korea bayanda abantu abangenwe yilolu bhubhane.
I-Egypt, i-Algeria, neNigeria ngamazwe ase-Afrika okuqinisekiswe ukuthi kutholakale abantu banaleli gciwane selokhu labheduka. Ukungenwa kwabantu base-Afrika yileli gciwane kufake ingebhe nezinkomba zokuthi sekuseduze ukuthi leli gciwane lisabalalele eNingizimu Afrika. Umuntu ongenwe yileli gciwane wase-Algeria kubikwa ukuthi akakaze alubhade eChina, ubeye e-Italy.
Ithimba elibhekene neCovid19 eNingizimu Afrika eliholwa uNgqongqoshe wezeMpilo kuleli, uDkt Zweli Mkhize ngeSonto, lithe leli lizwe likulungele ukubhekana nalesi sifo uma kungenzeka sihlasele. Kulesi sithangami, umemezele ukuthi abantu abangu-151 bakuleli abaseWuhan naseHubei bazobuyela kuleli ezinsukuwini eziyisikhombisa kuya kweziyishumi. Laba abantu abanalo igciwane leCovid19. UMkhize umemezele nohlelo oluzolandelwa ukubabuyisa olukuhlolwa nokuqoqelwa kwabo endaweni eyodwa kuze kube neziqiniseko sokuthi abanalutho.
Babalelwa ku-87 000 abantu osekuqinisekisiwe ukuthi bangenwe yileli gciwane emhlabeni, balinganiselwa ku-3 000 asebeshonile.
Lesi sifo sabheduka eChina ezinyangeni ezintathu ezedlule. Izindawo leli gciwane elimandla kakhulu kuzo iWuhan, eHubei.
Njengoba leli gciwane lisabalala cishe zonke izinsuku, inhlangano yezempilo emhlabeni iWorld Health Organisation (WHO), ithe kukhona okungenziwa umphakathi okunganciphisa ingozi yokuhlaselwa yileli gciwane.
Kwi-website yayo ikhiphe amasu angasiza ekutheni ungangenwa yigciwane icoronavirus.
Nanka amasu ongawasebenzisa ukugwema lesi sifo:
* Geza izandla ngoketshezi lokugeza izandla olunotshwala noma usebenzise insipho, uhlikihle izandla.
Lokhu kuthiwa kwenzelwa ukuthi uma likhona igciwane ngesikhathi uhlikihla izandla life.
* Gwema ukuthinta ikhala namehlo ngoba izandla zithinta yonke indawo kungenzeka zithinte indawo enegciwane bese ulifaka emzimbeni wakho ngazo izandla.
* Qhela ngemitha kumuntu okhwehlelayo noma othimulayo ngoba ngesikhathi umuntu ekhwehlela kuqhasha uketshezi okungenzeka ukuthi lunaleli gciwane.
* Uma unomkhuhlane, hlala ekhaya ungayi endaweni lapho uzohlangana khona nabanye abantu.
* Uma uba nenkinga yokuphefumula shesha ubonane nodokotela ngokushesha.
* Uma uqoba inyama engaphekiwe nephekiwe sebenzisa izithebe nemimese eyehlukene.
* Geza izandla ngaphambi kokuthi uthinte enye inyama uma usuqedile ukuqoba.
* Ungalokothi udle inyama yesilwane esizifele noma esiqedelwe ngoba sigula.
* Uma usebenza ngezilwane gqoka amagilavu amabhuzu nezimfonyo konke lokho ukushiye emsebenzini ungabuyi nakho ekhaya.
* Ungaluthathi uhambo uma unomkhuhlane, gwema ukusondelana nabantu abakhwehlelayo ngesikhathi usohambeni.
* Uma kunguwe othimulayo noma okhwehlelayo lahla iphepha obufinya ngalo, lilahle masinyane.
* Qikelela ukuthi ulilahla emgqomeni kadoti ovalekile.
* Izimfonyo zisetshenziswa uma uhlangana nomuntu onegciwane iCovid19.
* I-WHO ithe kuyinto ejwayelekile ukuthi kube nokukhathazeka ngaleli gciwane.
* Ithe uma kumele uhlale ekhaya yenza njalo abangani nabathandiweyo xhumana nabo ngocingo noma nge-email.
* Iqhube yathi uma uzizwa unengcindezi ungabonana nabeluleki bezengqondo kodwa ungaphuzi utshwala ngoba uthi uqeda usizi.